Global Voices teny Malagasy » Ady amin’ny tsi-fisaziana, nanapa-kevitra hanohana ny fiverenan’ilay mpikamban’ny vaomiera miady amin’ny kolikoly ny fitsarana ambony ao Goatemala · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Septambra 2018 6:39 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Ho zava-dehibe ho an'ny demokrasia Goatemalana ny 48 ora manaraka. Tamin'ny fanapahan-kevitra niarahana nanapaka , nandidy ny governemanta ny Fitsarana ara-Dalàmpanorenan'i Goatemala mba hamela ilay Kolombiana mpahay lalàna Ivan Velasquez hiverina any amin'ny firenena ary hanohy ny asany amin'ny maha-filohan'ny Vaomiera Iraisampirenena miady amin'ny tsi-fisaziana tohanan'ny Firenena Mikambana (CICIG amin'ny teny Espaniola) azy.
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny filoha Jimmy Morales fa tsy hanavao ny fe-potoam-piasan'ny CICIG ankoatra ny fanakanana ny fiverenan'i Velasquez, izay mipetraka any Etazonia ankehitriny. Nahatonga hatezerana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy tao amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra, ka nahatonga hetsi-panoherana sy fanamelohana  avy amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona. Izao fanapahan-kevitry ny filoha izao no nanaraka ny fiampangan'ny vaomiera  fisiana kolikoly, indrindra ny famatsiam-bola tsy ara-dalàna fanentanana  itoriana an'i Morales tenany, sy itoriana ireo ao amin'ny fianakaviany  izay miatrika fitsarana noho ny fanaovana hosoka eo anoloan'ny Fitsarana ara-dalàmpanorenana.
Tsy itsapana ireo andrim-panjakana Demaokratika ao Goatemalà ihany ny roa andro manaraka, fa ho an'ireo sehatra izay efa nanohana taloha ny filoha. Araka ny antontan-taratasy ofisialin'ny fitsarana , ny tsy fankatoavana ny baikon'ny Fitsarana dia mety midika fanesorana ny filoha  amin'ny alàlan'ny rafi-dalàmpanorenana.
Goatemala: farany ny didim-pitsaran'ny fitsarana momba ny lalampanorenana. Tsy misy fomba ara-dalàna/ara-dalàmpanorenana tsy hiraharahiana na hamadihana ny didim-pitsarana androany alina izay manohana ny @CICIGgt  manoloana ny filoha @jimmymoralesgt . Inona no ho ataony sy ny tambajotran'ny sangany mpiara-dia azy? Hankatòa ny lalàm-panorenana sa hiady = fanonganam-panjakana
Nahazo fisarihana manokana ireo tranga ireo rehefa jerena amin'ny alàlan'ny ady maharitra sy sarotra amin'ny kolikoly any Goatemalà sy ny korontana ara-politikan'ny firenena vao haingana. Narahana hetsi-bahoaka goavana dia goavana izay leo ny kolikoly sy ny tsifisaziana  eo amin'ny kilasy politika izay niafara tamin'ny fialan'ny filoha Otto Pérez Molina  tamin'ny taona 2015 ny fisandratam-pahefan'i Morales .
Taorian'ny krizy ara-politika tamin'ny taona 2015, nandray andraikitra lehibe  ihany koa ny fisian'ny Vaomiera tamin'ny fanadihadiana ny raharaha kolikoly, nandrasana nohadihadiana akaiky  ny governemantan'i Morales.
Satria voarohirohy amin'ny fanafintohinana ara-politika sy kolikoly  i Morales, heverina ho fotoana manan-danja ahafahan'i Goatemala mandroso amin'ny fiarovana ny andrim-panjakana demokratika, na mety fidirana amin'ny tsirefesimandidy ny krizy ankehitriny.
Mandritra izany fotoana izany, nanomboka nahazo mpanaraka indray ny tenirohy #RenunciaYa  (“Mialà izao”), izay nampiasaina nandritra ny hetsi-panoherana taona 2015, raha nokarakaraina teny an-dalambe ny hetsi-panoherana. Mandritra izany, nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fahitana ny krizin'i Goatemalà ao amin'ny faritra ny fampahalalam-baovao iraisampirenena  tahaka ny gazety Kolombiana El Espectador  ary nandrisika ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena mba hijery ny fivoarany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/19/126367/
 Tamin'ny fanapahan-kevitra niarahana nanapaka: https://www.reuters.com/article/us-guatemala-politics/guatemala-court-rules-for-return-of-chief-of-anti-graft-body-idUSKCN1LX04S?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5b9f34f404d301781d53c94c&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
 hatezerana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy tao amin'ny firenena : https://www.theguardian.com/world/2018/sep/05/guatemala-cicig-ivan-velasquez-jimmy-morales-ban
 hetsi-panoherana sy fanamelohana: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/guatemaltecos-protestan-contra-la-no-renovacion-del-mandato-de-cicig
 fiampangan'ny vaomiera: https://www.nytimes.com/reuters/2018/09/05/world/americas/05reuters-guatemala-corruption.html
 ny famatsiam-bola tsy ara-dalàna fanentanana: https://www.insightcrime.org/investigations/president-jimmy-morales-guatemalas-original-sin/
 ao amin'ny fianakaviany: https://www.reuters.com/article/us-guatemala-corruption/trial-against-guatemalan-presidents-brother-son-begins-idUSKCN1BA2Z8
 antontan-taratasy ofisialin'ny fitsarana: https://share.riseup.net/#LzUjcEEJzyui3P4OynH6gQ
 mety midika fanesorana ny filoha: https://elperiodicocr.com/tribunal-ordena-a-presidente-de-guatemala-que-permita-regreso-de-jefe-de-grupo-anticorrupcion-de-onu/
 Narahana hetsi-bahoaka goavana dia goavana izay leo ny kolikoly sy ny tsifisaziana: https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/people-power-guatemalan-spring-150903075327898.html
 nandray andraikitra lehibe: https://www.americasquarterly.org/content/president-perez-molina-refuses-renew-cicig-mandate
 nandrasana nohadihadiana akaiky: https://globalvoices.org/2015/12/04/jimmy-morales-the-new-face-of-guatemalas-military-old-guard/
 fanafintohinana ara-politika sy kolikoly: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/13/guatemala-jimmy-morales-corruption-cicig
 ny fampahalalam-baovao iraisampirenena: https://www.nytimes.com/es/2017/09/20/guatemala-sera-una-republica-mafiosa-o-una-democracia/
 gazety Kolombiana El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/editorial/guatemala-necesita-la-atencion-del-mundo-articulo-713374